Autumn - isikhathi esihle kakhulu ukuya. Emgwaqweni agcwele imibala, hhayi ashisayo kakhulu likhanya enhle. Nokho, lokhu kuyinto ohlangothini olulodwa kuphela. Uma ubheka lesi sikhathi sonyaka ngendlela ehlukile, kuba izinyanga ekwindla ukuletha umswakama imvula njalo, ngesikhathi lapho kungekho isifiso ukuhamba ngomgwaqo. Kodwa kuthiwani uma ufuna ukuya emsebenzini noma esikoleni? Impendulo: ukuthenga Zest isambulela.
Abaningi uzokubuza, kungani ntandokazi kufanele inikwe lokhu brand. Njengomthetho, asetshenziswa wonke ukuthi isambulela - Imfanelo kubalulekile, okumele zibe khona kukho konke ekhaya. Nokho, indlela ukukhetha ukuze liyokuma iminyaka eminingi futhi awazange ayiphule phansi isivunguvungu lokuqala umoya, ungazi konke. Empeleni, le ndlela yokunquma ezivamile ezinomthelela ukuthengwa isambulela ezithile, is klamo. Yiqiniso, kubaluleke kakhulu ukuthi isiphi isesekeli kufanele kube ngokugcwele kuvumelana izingubo. Nokho, isambulela amahle - lokhu akukona isiqinisekiso izinga. Kule ndaba, eziningi ubuqili, okuzoxoxwa ngayo kulesi sihloko.
lokuhweba Eliqinisekisiwe - kuzokuqinisekiswa ikhwalithi
Ngakho into yokuqala uqaphela - umenzi. Abuyekezwa inkampani isikhathi eside lokuveza imikhiqizo emakethe, siye bazizuzela idumela ezithile. Njengomthetho, imikhiqizo yabo ezibizayo ngenxa sha kugqugquzelwa, kodwa olungisiswayo izinga. Esinye salezo efakazelwe brand kuyinto Zest. Izambulela, ukubuyekezwa okuyizinto oqondile, ngokwanele eliphezulu futhi zikhululekile, kulula ukuba bakwamukele isikhwama semali. Umumo ethulwa ezihlukahlukene izixazululo. Yingakho ukukhetha option ezifanele kakhulu kungaba lula ngokwanele. inkampani elikhuhluziwe inikeza zabesifazane, amadoda kanye izambulela zezingane.
Uma sicabangela Umklamo hood, ke kudingeka siyinake ipeni. Kukhona amabili nokuhlola yayo zindlela:
Elikhuhluziwe isambulela enziwe rubberized, ukhuni lesikhumba izibambo. Ziyakwazi kulula Esandleni sakho, futhi musa sehla off. Asikho isidingo ukuxosha izibambo anemibala zegolide, njengoba ekugcineni alahlekelwe ilungelo ayebuthaka yabo. Futhi uma le nqubo isetshenziselwa yekhwalithi ephansi ezibonakalayo, kungenzeka kakhulu ukuthi upende izohamba emamaki ezandleni. Uma ukhetha i-umbrella nge isiphatho sesigodo ufuna ukuhlola for ukukhubazeka kanye umonakalo. Kubalulekile ukuthi wambozwa izinga lacquer enamathela.
Isambulela Zest ingase ifakwe omunye ezintathu izinhlobo ukuvulwa:
ngokugcwele okuzenzakalelayo (umshini).
Futhi inothi ukuthi ukuqoqwa sha Zest ethulwa onobuhle letingemasayizi lahlukene. Idondolo leli, onobuhle standard 3 anezele, mini-izambulela kanye ephaketheni.
Shiny, ezenziwe ngensimbi ngenduku spokes wabancane nezimo futhi unike kobukhulu umkhiqizo, kodwa benamandla, ngeke avumele design ukuphula ngisho imimoya enamandla. Fiberglass - material yesimanje, bakwazi ukubhekana nokuhlupheka, nezimo kodwa eqinile, okuyinto esetshenziswa izambulela eziningi. Nokho, kukhona onobuhle lapho Uhlaka eyenziwe aluminium nensimbi.
Isibalo spokes kuthinta isambulela kanjani eliqinile le ngeke Zest. Nokho, kumelwe siqonde ukuthi abengeziwe baba, ifomu kuyoba oyindilinga xaxa, Dome. Spokes kufanele bufakwe ngilugweda phezulu. Uma asethe njó ephambene, uzimele uyosabalala ngesikhathi isivunguvungu kancane umoya.
Isambulela esiqine kakhulu futhi babe nokuphila isikhathi eside. Nokho, uma kwanqunywa ukuba uthenga isambulela ukusonga, preference ukunikeza ke induku eyodwa okuyinto ubuso kakhulu.
Lapho ekhetha umkhiqizo, kudingeka sinake izinto kusuka kulo yakhiwa. Ngezinye inkampani isambulela Zest Dome eyenziwe i-polyester. Lokhu kwaziswa kuyinto izinga uqine futhi high, ikakhulukazi uma ziqhathaniswa inayiloni. Polyester ngokuvamile afuthwe ngesibulali ekhuthaza ekhethekile kokuba amanzi repellency. Nokho, kukhona eyodwa ethile: ngeshwa, it is ngokushesha wageza off. Ifomu mushroom ofeleba abe Dome ikhuthaza omiswe okusheshayo futhi slide emanzini. Futhi, ungakhohlwa emalungeni. Kufanele iqonde futhi alinakho izikhala.
Zest izambulela zabesilisa ethulwa, ngokuvamile black umbala wesikimu, kodwa abesifazane - ezihlukahlukene imibala. Nazi amaqoqo ezivamile:
Ntambo Dye uchungechunge - design oxube okubi nokuhle, ehambisana ne-England zakudala;
Habib - usilika onobuhle ngokubukeka ocacile uqobo;
Photo uchungechunge - uchungechunge zabalingiswa umdwebi odumile Van Gogh;
uchungechunge Sparkle - esiqinile, kodwa ngesikhathi esifanayo ngokubabazekayo Dome izambulela nge abakhaliphile ngokuvamile monochromatic.
Ukuhweba endlini "Stockmann" (Helsinki)
"Mascotte" - brand izicathulo ne engaphezu kweyikhulu nakho
Engaphathekile wamathumbu syndrome: Izimpawu, Ukwelashwa
Isikhafu zasemahhovisi: amafomu, imibala. Indlela ukugqoka lo mkhiqizo?
Desna (umfula) - lo owumthelela elikhulu Dnieper
Futhi kungani utamatisi basonta amahlamvu?
Yeka ukuthi kuyinto izinyo ukwanda? Izindlela namazinyo umthamo
Neziphethu ku Kherson esifundeni Ukraine: kanjani ukuba uthole amanye amathiphu zabahamba
Taurus-Monkey (Male): izici futhi ukuhambisana nezinye izimpawu